अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि एनएमबी क्यापिटलद्वारा विभेद : जागिरमा नल्याउन विज्ञापन नै खारेज ! | Diyopost - ओझेलको खबर अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि एनएमबी क्यापिटलद्वारा विभेद : जागिरमा नल्याउन विज्ञापन नै खारेज ! | Diyopost - ओझेलको खबर
अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि एनएमबी क्यापिटलद्वारा विभेद : जागिरमा नल्याउन विज्ञापन नै खारेज !
दियो पोस्ट शुक्रबार, बैशाख १६, २०७९ | १५:२९:१३
काठमाडौं । एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले फरक क्षमता भएका एक व्यक्तिमाथि चरम विभेद गरेको पाइएको छ । एनएमबी क्यापिटलले गत कार्तिकमा म्यानेजर ट्रेनिका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । सोही विज्ञापनलाई पछ्याउँदै भक्तपुर बस्ने फरक क्षमता भएका सौरभ कार्कीले पनि परिक्षामा भाग लिए । क्यापिटलको उम्मेदवार छनौट समितिले लिएको परिक्षामा सबै पक्षबाट कार्की एक नम्बरमा थिए । ‘म सबै पक्षबाट एक नम्बरमा थिएँ । मैले फाइनान्समा एमबीए गरेको थिएँ,’ उनले दियोपोस्टसँग भने,‘तर, मेरो नाम पहिलो नम्बरमा भएकै कारण एनएमबी क्यापिटलले विज्ञापन नै खारेज गरेर मलाई जागिरबाटै बञ्चित गर्यो ।’
कार्कीले एनएमबी क्यापिटल विरुद्ध धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका छन् । उनले विभिन्न निकायमा दिएको उजुरी अनुसार गत कार्तिक १६ गते एनएमबी क्यापिटलले ३० गतेसम्म म्याद राखेर म्यानेजमेन्ट ट्रेनीको पदमा खुल्ला विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । उक्त पदमा मास्टर्स डिग्री प्रथम श्रेणी र फाइनान्स स्पेसलाइजेशनको शैक्षिक योग्यता माग गरिएको थियो ।
बबरमहलस्थित किङ्ग्स कलेजबाट जिपिए ३.९७ ल्याएर एमबिए उत्तिर्ण गरेका सौरवले गत कार्तिक २६ गते आवेदन दिएका थिए । उनको आवेदन स्विकार गरिएको थियो ।
मंसिर २० मा उनलाई जब्स डाइनामिक्स नेपाली प्रा.लीले इमेल गरेको थियो । जसमा उनलाई बधाई सहित उम्मेदवारको सर्टलिस्टमा समावेश गरिएको जानकारी गराइएको थियो । संस्थाको निति अनुसार उनले प्रतिष्पर्धाको विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्ने थियो । मंसिर २५ मा छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई लिखित परिक्षामा सामेल गराइयो । उक्त परिक्षामा सौरभले सोचे भन्दा राम्रो गरेको उनको दाबी छ ।
पुष ५ गते उनलाई इमेलमार्फत लिखित परिक्षामा पास भएको जानकारी आयो । पुष ६ गते अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो । ‘जसमा मैले राम्रोसँग सहभागीता जनाएँ । सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तर मैले सहजै दिएँ र अन्तर्वार्ता राम्रो भएको मलाई महशुस भयो,’ उनले उजुरीमा भनेका छन्,‘२०७८ पुस १८ गते पहिलो चरणको अन्तर्वार्ताबाट पास भएर म अन्तिम अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएको इमेल मलाई प्राप्त भयो । पुस २१ मा अन्तिम अन्तर्वार्ताको मिति राखियो ।’
सिइओ दिपेश कुमार बैद्य, कमल कुमार नेपाल र स्मिृति महर्जन
उक्त अन्तर्वार्तामा पनि उनले सोचेभन्दा निकै राम्रो गरे । उनलाई अब उक्त पदमा छनौट हुन्छु भन्ने लागेको थियो । तर, विडम्बना पुस १८ मै एनएमबी क्यापिटलले उनलाई इमेल गर्यो जहाँ अंग्रेजिमा लेखिएको थियो,
“We regret to inform you that you have not been selected for the “Management Trainee” position. Thank you for showing your interest and time”
सौरवलाई प्रतिष्पर्धाबाट छनौट नहुनुत स्वभाविक नै लाग्यो । हरेक चरणमा उनले गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनका बाबजुत पनि छनौट नहुनुमा उनले आफूमाथि भएको अपांगतालाई शंकाको घेरामा राखे । उनले आफ्ना शुभ चिन्तकहरुलाई गुनासो पनि गरे । उनका शुभचिन्तकहरुले एनएमबी क्यापिटलमा फोन गरेर बुझे । क्यापिटलले ‘फाइनल रिजल्ट निकालेको छैन । त्यो भाई त्यतिकै आवेगमा आयो । भन्ने जवाफ दिए । कसैलाई भने उक्त पदमा कोही पनि छनौट हुन नसकेको भन्ने जवाफ दिइयो ।
फिट नहुनुुको कारणबारे उनका आफन्तहरुले जवाफ माग्दा कसैलाई ‘संचार कौशल नभएको , राम्रोसँग बोल्न नजान्ने, नसक्ने’ भन्न जवाफ आएपछि उनको शंका सहि थियो भन्ने पुष्टि गर्यो । त्यसपछि उनलाई लाग्यो–‘यो त अपाङ्गताको आधारमा गरिएको भेदभाव हो ।’
त्यसपछि उनली अधिवक्ता खगेन्द्र घिमिरेलाई कानुनी परामर्श लिन पुगे । खगेन्द्रले एनएमबी क्यापिटलको मानव संशाधन प्रमुखसँग टेलिफोन गरे ।
खगेन्द्रलाई एनएमबी बैंककी स्मिृति महर्जनले दिएको जवाफ अनुसार पहिलो तीन चरणमा सौरव शिर्ष स्थानमा दिए । खगेन्द्रलाई स्मिृतिले दिएको जवाफमा घुमाउरो तरिकाले सौरवलाई अपाङ्गता भएकै कारण छनौट नगरिइएको स्विकार गरिएको थियो ।
अधिवक्ता खगेन्द्रको सुझाव अनुसार सौरवले सुचनाको हक प्रयोग गरि आफू के कति कारणले छनौटमा नपरेको हो भन्ने लिखित जवाफ मागे । निवेदन दर्ताको क्रममा त्यहाँ उनको भनाभन पनि भयो । छलफलका क्रममा त्यहाँको तत्कालिन कार्यकारी अधिकृतले ‘भाई सहानुभूतिले जागिर पाइँदैन अनि हरेक कारणमा हामीले स्पष्टिकरण दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन भनी ठाडो जवाफ दिए । ‘जबकी म सहानुभूति खोजेर जागिरको भिख माग्न गएकै थिइन । मैले मेरो सुचनाको हक प्रयोग गरि उक्त पदमा म नछानिनुको कारण के होला भन्ने जानकारी लिन मात्र गएको थिएँ,’ सौरवले उजुरीमा लेखेका छन्,‘विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरुले मलाई पढाउने गुरुहरुलाई फोन गरि त्यो भाईलाई सम्झाई बुझाई गरिदिनु भन्ने जस्ता अनुरोध गर्नु भएछ । जब म कानुनी लडाइँको बाटो जान खोज्यो भन्ने थाहा पाएपछि ।’
नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ को धारा २७ मा काम र रोजगारीमा अपांगताको आधारमा गरिने भेदभाव निर्मुल गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा २४ को ३ मा ‘कुनै प्रतिष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विरुद्ध रोजगारी तथा सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा भेदभाव गर्न पाइने छैन,’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
एनएमबी क्यापिटलका चिफ बिजनेश अफिसर कमल प्रसाद नेपाल भने आफूहरुले कार्कीमाथि कुनै पनि विभेद नगरेको बताउँछन् । ‘परिक्षा दिने मान्छेले राम्रो गरेको छु भन्छ । उहाँले आफूले उत्कृष्ठ गरेँ भनेर विभिन्न माध्यमबाट प्रचारवाजी गर्नु भएको छ । त्यो कुन आधारमा हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ नेपाल भन्छन,‘हामीले उहाँलाई कुन कुरा गर्न सक्नु हुन्न भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँले कलम समाएर लेख्न सक्दिन भन्नुभएको थियो । हामीले उहाँको कुनै पनि शारिरिक अपांगताको कुरामा विभेद गरेका छैनौँ । उहाँले आफ्नो असक्ततालाई हतियार बनाउन खोज्नु भयो । हामीले कुनै प्रश्न सोधेका छैनौँ ।’
आफूहरुले आउट सोर्स कम्पनिबाट सौरवको उम्मेदवारी लिएको नेपालको दाबी छ ।
शुक्रबार, बैशाख १६, २०७९ | १५:२९:१३